Dibad bax lagu dalbanayay in Sheekh Xasan Daahir Maxkamad lasoo taago oo Muqdisho ka dhacay(Daawo Sawirada) | warsugansomaliya.wordpress.com
Dibad bax lagu dalbanayay in Sheekh Xasan Daahir Maxkamad lasoo taago oo Muqdisho ka dhacay(Daawo Sawirada)
Waxaa Maanta Magaalada Muqdisho ka dhacay dibad bax kooban oo lagu dalbanayay in maxkamad lasoo taago Sheekh Xasan Daahir Aweys oo kamid ahaa Saraakiishii Al-Shabaab hadana gacanta ugu jira Dowlada Federaalka Soomaaliya.
Dibad baxan waxaa dhigayay dad u badnaa haween kuwaa oo watay boorar lagu dalbanayo in Sheekh Xasan Daahir Aweys maxkamad lasoo taago laguna qaado dambiyo ay sheegeen in uu ka galay dalka iyo dadkaba.
Dadkan dibad baxa dhigayay ayaa Sheekh Xasan Daahir Aweys ku tilmaamay dambiile iyo in uu barakiciyay dad badan oo masaakiin ah kadib markii uu dagaal korkooda ku icklaamiyay , waxa ayna Dowlada Soomaaliya ka dalbadeen in aan lasii deyn Sheekh oo Maxkamad lasoo taago.
Dibad baxan ayaan si rasmi ah loo ogeyn cida soo abaabushay, hasa haatee waxaa uu kusoo aadaya xili maalmo kahor xaafado kamid ah Degmada Hodan ay ka dhaceen dibnad baxyo lagu taageerayay Sheekh Xasan Daahir laguna dalbanayay in lasoo daayo.
← Daawo Sawirada’ Ciidamada Dowlada oo Muqdisho ku toogtay Nin katirsan Al-Shabaab oo maanta dilay Askari katirsanaa Ciidanka Dowlada
Akhri labo qodob oo ay Dowlada uga cabsi qabto Sheekh Xasan Daahir Aweys hadii uu dalka sii joogo iyo Shiikh Xasan Daahir Aways oo →